မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲ မတိုင်ခင် နည်းဗျူဟာပိုင်း ချဉ်းကပ်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း(၁)
10 Nov 2018 . 5:26 PM
ဒီတစ်ပတ် Super Sunday မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီး မန်စီးတီးနဲ့ မန်ယူတို့ ကစားမယ့် မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲ ပါဝင်နေတယ်။ ချယ်လ်ဆီး၊ လီဗာပူးလ်တို့နဲ့ (၂)မှတ်အကွာ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ဆုံးမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အခုဒါဘီပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့ အလေးသာနေပေမယ့် နောက်ဆုံး(၄)ပွဲမှာ (၃)ပွဲနိုင်ထားတဲ့ မန်ယူကိုလည်း လျှော့တွက်လို့ မရဘူး။
မန်ချက်စတာဒါဘီဆိုတာလည်း မထင်မှတ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အမြဲတမ်း မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်လို့ အခုပွဲမှာရော ဘာတွေ ဖြစ်လာဦးမလဲ။ ဒါကြောင့် မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမတိုင်ခင် ဒီနှစ်သင်းရဲ့ နည်းဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချဉ်းကပ်ကြည့်ချင်ပါတယ် . . .
ဒီပွဲမှာ ဦးစားပေးပြောရမှာ ဂွါဒီယိုလာ Guardiola နဲ့ မော်ရင်ဟို Mourinho တို့ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာမီလန်နည်းပြဘ၀မှာ ဘာစီလိုနာကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တုန်းက နူးကမ့်ကွင်းကွင်းကို ပတ်ပြေးပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟိုနဲ့ ဂွါဒီယိုလာတို့ရဲ့ Personal War က စပိန်မြေမှာ ပိုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။ တစ်ဦးက ရီးယဲလ်နည်းပြ၊ တစ်ဦးက ဘာစီလိုနာနည်းပြဆိုတော့ နှစ်ဖက်နည်းပြသာမက သူတို့ ကိုင်တွယ်တဲ့နှစ်သင်းကြားမှာပါ Clash တွေက ပြင်းထန်ခဲ့တယ်။ အခု အင်္ဂလန်မြေမှာလည်း သမိုင်းကြောင်းအရ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ မန်ချက်စတာ နှစ်သင်းရဲ့ နည်းပြတွေဖြစ်နေတယ်။
အင်္ဂလန်မြေမှာ ဂွါဒီယိုလာနဲ့ မော်ရင်ဟိုတို့ဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ စုစုပေါင်း(၅)ကြိမ် တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ပထမဆုံးဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မြေက ဒါဘီပွဲမှာ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးက (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ လိဂ်ဖလားပွဲမှာ မန်ယူက ရှုံးကြွေးပြန်ဆပ်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ဒုတိယအကျော့ အီတီဟတ်ကွင်းမှာတော့ ဂိုးမရှိသရေနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက ဂွါဒီယိုလာဟာ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာပဲ မန်ယူကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့သလို အီတီဟတ်ရောက်တော့ မန်ယူအသင်းက (၂)ဂိုးအရှုံးကနေ (၃)ဂိုးပြန်သွင်းပြီး အနိုင်ပြန်ရခဲ့တာကို ပရိသတ်တွေ အသိပါပဲ။ စုစုပေါင်း ဆုံတွေ့မှုမှာ ဂွါဒီယိုလာက (၇)ကြိမ် နိုင်၊ မော်ရင်ဟိုက (၃)ကြိမ် နိုင်ပြီး (၆)ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလတုန်းက ကစားခဲ့တဲ့ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင် မန်ယူအသင်းရဲ့ ခြေစွမ်း၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းက အဆိုးရွားဆုံးအနေအထားမှာ ရှိခဲ့ပြီး မော်ရင်ဟိုလည်း သူ့ရာထူးကို လက်လွှတ်ရလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ နယူးကာဆယ်ကို (၂)ဂိုး အရှုံးကနေ (၃)ဂိုးပြန်သွင်း အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ မန်ယူအသင်းမှာ ပျောက်ဆုံးနေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူရဲနီစိတ်ဓာတ်နဲ့ Fighting Spirit ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ချယ်လ်ဆီးကို အနိုင်ရလုနီးပါးဖြစ်ပြီးမှ သရေကျ၊ အဲဗာတန်ကို အနိုင်၊ ဘုန်းမောက်ကို အရှုံးကနေ အနိုင်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို အရှုံးကနေ အနိုင် ဆိုတဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ မန်ယူအသင်းရဲ့ ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်ကစားပုံမှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့တာက လူကာကူ Lukaku ဒဏ်ရာရခဲ့တာလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။
ပွဲဆက်တွေများ၊ ဖိအားတွေ များနေပြီး Impact မဖြစ်တဲ့ လူကာကူကို မော်ရင်ဟိုကလည်း Line Up Out ဖို့ ၀န်လေးနေ။ ဂိုးမရတာ ပွဲစိတ်လာတော့ လူကာကူကိုယ်တိုင်ကလည်း Confidence Out လာ။ အဲဒါနဲ့ တိုင်ပတ်နေတဲ့ မန်ယူတိုက်စစ်က လူကာကူ ဒဏ်ရာရတော့မှပဲ အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတယ်။ လူကာကူ မပါတဲ့ တိုက်စစ်မှာ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် Rashford ၊ ဆန်းချက်ဇ် Alexis Sanchez ၊ မာစီယဲလ် Anthony Martial တို့ရဲ့ အတွဲအဖက်တွေက ပိုပြီး ရင်ခုန်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ သူတို့ (၃)ယောက်ရဲ့ Off The Ball Movement ၊ တွဲလုံးတွေ၊ Individual Skill တွေက အရင်တုန်းက မန်ယူကစားပုံကို ပြန်အမှတ်ရစေသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီး (၃)ယောက်စလုံး တိုက်စစ်မှာ နေရာစုံကစားနိုင်လို့လည်း မန်ယူတိုက်စစ်ဆင်ပုံက အရင်ကထက် အန္တရာယ်များလာတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက ဒီ(၃)ယောက်စလုံးဟာ Finishing Skill အားနည်းတာပါပဲ။ မန်ယူအသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းအပြောင်းအလဲမှာ အရေးပါတာက ကွင်းလယ်လူ ဟာရဲရား Ander Herrera ပါ။ သူ့ရဲ့ Energy နဲ့ Aggressiveness တွေက မန်ယူ ကွင်းလယ်မှာ တကယ်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီး ဟာရဲရားကြောင့် ကွင်းလယ်လိုလို၊ ခံစစ်လိုလို ဖြစ်နေတဲ့ မာတစ် Matic အတွက်လည်း ၀န်ပေ့ါသွားတယ်။ ဟာရဲရားက ညာခြမ်းကနေ Box To Box ကစား၊ မာတစ်က Deep Lying ပုံစံနဲ့ ခံစစ်ကို Cover လုပ်နိုင်လို့လည်း မန်ယူကွင်းလယ်နဲ့ ခံစစ်ကြားမှာ Gap ဖြစ်နေတာတွေ လျော့ကျသွားတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အဲဒီမှာ ပေ့ါဘာကလည်း သူအားသာတဲ့ ကွင်းလယ်ဘယ်ခြမ်းကနေ တိုက်စစ်ကို ပိုပြီး လိုက်ကစားလို့ ရသွားတယ်။ ဒါကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း မန်ယူအသင်းရဲ့ အသက်က ပြင်သစ်သားတွေဖြစ်တဲ့ မာစီယဲလ်နဲ့ ပေါ့ဘာတို့ရဲ့ ဘယ်ခြမ်းဖြစ်နေတာပါ။
မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ပွဲမှာ (၄-၃-၃)ပုံစံအစား ကွင်းလယ်အသာရဖို့ (၄-၁-၄-၁)နဲ့ ပွဲထွက်လာဖို့ များတယ်။ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာနိုင်တာက မာစီယဲလ်ကို တိုက်စစ်ဘယ်ခြမ်းအစား ကွင်းလယ် ဘယ်တောင်ပံမှာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားဖို့ရှိနေပြီး မန်စီးတီးညာနောက်ခံလူ ဝေါလ်ကာ Kyle Walker ကို Control လုပ်နိုင်ဖို့ အဓိကဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီပုံစံဆိုရင် မန်ယူရဲ့ ခံစစ်က Solid ဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့် Counter ပြန်စရင်တော့ အခက်အခဲရှိလာမယ့် သဘောပါပဲ။
မန်ယူမှာ အားအနည်းဆုံးက စမောလင်း Smalling – လင်ဒီလော့ဖ် Victor Lindelöf တို့အတွဲ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အခုနောက်ပိုင်း စမောလင်း အမှားများလာတာက နည်းနည်း စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်။ Tactic Master ကြီ မော်ရင်ဟို ဘယ်လိုနည်းဗျူဟာတွေ အသုံးပြုမှာလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဒါကတော့ မန်ယူအသင်းရဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းကို ချဉ်းကပ်ကြည့်တာဖြစ်ပြီး မန်စီးတီးရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို အပိုင်း(၂)အဖြစ် ဆက်လက် သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော် အားပေးကြပါဦး . . .
Photo:YouTube,Sumberbola,Stadium Astro,The Busby Babe,FansBet,The Independent,Fox Sports
မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲ မတိုငျခငျ နညျးဗြူဟာပိုငျး ခဉျြးကပျကွညျ့ခွငျး အပိုငျး(၁)
ဒီတဈပတျ Super Sunday မှာတော့ တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိသတျတှေ အကွိုကျဖွဈတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျထိပျသီး မနျစီးတီးနဲ့ မနျယူတို့ ကစားမယျ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲ ပါဝငျနတေယျ။ ခယျြလျဆီး၊ လီဗာပူးလျတို့နဲ့ (၂)မှတျအကှာ အမှတျပေးဇယား ထိပျဆုံးမှာ ဦးဆောငျနတေဲ့ မနျစီးတီးအသငျးဟာ အခုဒါဘီပှဲမှာ အနိုငျရဖို့ အလေးသာနပေမေယျ့ နောကျဆုံး(၄)ပှဲမှာ (၃)ပှဲနိုငျထားတဲ့ မနျယူကိုလညျး လြှော့တှကျလို့ မရဘူး။
မနျခကျြစတာဒါဘီဆိုတာလညျး မထငျမှတျတဲ့ အပွောငျးအလဲတှကေို အမွဲတမျး မွငျတှနေ့ရေတာဖွဈလို့ အခုပှဲမှာရော ဘာတှေ ဖွဈလာဦးမလဲ။ ဒါကွောငျ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲမတိုငျခငျ ဒီနှဈသငျးရဲ့ နညျးဗြူဟာနဲ့ပတျသကျပွီး ခဉျြးကပျကွညျ့ခငျြပါတယျ . . .
ဒီပှဲမှာ ဦးစားပေးပွောရမှာ ဂှါဒီယိုလာ Guardiola နဲ့ မျောရငျဟို Mourinho တို့ရဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျတဲ့ သမိုငျးကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။ အငျတာမီလနျနညျးပွဘဝမှာ ဘာစီလိုနာကို ကြျောဖွတျခဲ့တုနျးက နူးကမျ့ကှငျးကှငျးကို ပတျပွေးပွီး အောငျပှဲခံခဲ့တဲ့ မျောရငျဟိုနဲ့ ဂှါဒီယိုလာတို့ရဲ့ Personal War က စပိနျမွမှော ပိုပွငျးထနျလာခဲ့တယျ။ တဈဦးက ရီးယဲလျနညျးပွ၊ တဈဦးက ဘာစီလိုနာနညျးပွဆိုတော့ နှဈဖကျနညျးပွသာမက သူတို့ ကိုငျတှယျတဲ့နှဈသငျးကွားမှာပါ Clash တှကေ ပွငျးထနျခဲ့တယျ။ အခု အင်ျဂလနျမွမှောလညျး သမိုငျးကွောငျးအရ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျတဲ့ မနျခကျြစတာ နှဈသငျးရဲ့ နညျးပွတှဖွေဈနတေယျ။
အင်ျဂလနျမွမှော ဂှါဒီယိုလာနဲ့ မျောရငျဟိုတို့ဟာ ပွိုငျပှဲစုံ စုစုပေါငျး(၅)ကွိမျ တှခေဲ့ပွီးပါပွီ။ ပထမဆုံးဆုံတှခေဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမွကေ ဒါဘီပှဲမှာ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ မနျစီးတီးက (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။ လိဂျဖလားပှဲမှာ မနျယူက ရှုံးကွှေးပွနျဆပျခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျ ဒုတိယအကြော့ အီတီဟတျကှငျးမှာတော့ ဂိုးမရှိသရနေဲ့ ပွီးဆုံးခဲ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက ဂှါဒီယိုလာဟာ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာပဲ မနျယူကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့သလို အီတီဟတျရောကျတော့ မနျယူအသငျးက (၂)ဂိုးအရှုံးကနေ (၃)ဂိုးပွနျသှငျးပွီး အနိုငျပွနျရခဲ့တာကို ပရိသတျတှေ အသိပါပဲ။ စုစုပေါငျး ဆုံတှမှေု့မှာ ဂှါဒီယိုလာက (၇)ကွိမျ နိုငျ၊ မျောရငျဟိုက (၃)ကွိမျ နိုငျပွီး (၆)ပှဲသရကေခြဲ့တယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလတုနျးက ကစားခဲ့တဲ့ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမတိုငျခငျ မနျယူအသငျးရဲ့ ခွစှေမျး၊ စိတျဓာတျပိုငျးက အဆိုးရှားဆုံးအနအေထားမှာ ရှိခဲ့ပွီး မျောရငျဟိုလညျး သူ့ရာထူးကို လကျလှတျရလုနီးပါးဖွဈခဲ့ရတယျ။ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ နယူးကာဆယျကို (၂)ဂိုး အရှုံးကနေ (၃)ဂိုးပွနျသှငျး အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ မနျယူအသငျးမှာ ပြောကျဆုံးနတော ကွာပွီဖွဈတဲ့ သူရဲနီစိတျဓာတျနဲ့ Fighting Spirit ပွနျရခဲ့တယျလို့ ဆိုရမယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျးပှဲတှမှော ခယျြလျဆီးကို အနိုငျရလုနီးပါးဖွဈပွီးမှ သရကြေ၊ အဲဗာတနျကို အနိုငျ၊ ဘုနျးမောကျကို အရှုံးကနေ အနိုငျ၊ ဂြူဗငျတပျဈကို အရှုံးကနေ အနိုငျ ဆိုတဲ့ ရလဒျတှေ ထှကျပျေါခဲ့တယျ။ မနျယူအသငျးရဲ့ ငွီးငှစေ့ရာကောငျးတဲ့ တိုကျစဈကစားပုံမှာ အပွောငျးအလဲဖွဈခဲ့တာက လူကာကူ Lukaku ဒဏျရာရခဲ့တာလို့ပဲ ပွောရမှာပါ။
ပှဲဆကျတှမြေား၊ ဖိအားတှေ မြားနပွေီး Impact မဖွဈတဲ့ လူကာကူကို မျောရငျဟိုကလညျး Line Up Out ဖို့ ဝနျလေးနေ။ ဂိုးမရတာ ပှဲစိတျလာတော့ လူကာကူကိုယျတိုငျကလညျး Confidence Out လာ။ အဲဒါနဲ့ တိုငျပတျနတေဲ့ မနျယူတိုကျစဈက လူကာကူ ဒဏျရာရတော့မှပဲ အပွောငျးအလဲဖွဈသှားတယျ။ လူကာကူ မပါတဲ့ တိုကျစဈမှာ ရပျရျှဖို့ဒျ Rashford ၊ ဆနျးခကျြဇျ Alexis Sanchez ၊ မာစီယဲလျ Anthony Martial တို့ရဲ့ အတှဲအဖကျတှကေ ပိုပွီး ရငျခုနျစရာကောငျးခဲ့တယျ။ သူတို့ (၃)ယောကျရဲ့ Off The Ball Movement ၊ တှဲလုံးတှေ၊ Individual Skill တှကေ အရငျတုနျးက မနျယူကစားပုံကို ပွနျအမှတျရစသေလိုဖွဈခဲ့ပွီး (၃)ယောကျစလုံး တိုကျစဈမှာ နရောစုံကစားနိုငျလို့လညျး မနျယူတိုကျစဈဆငျပုံက အရငျကထကျ အန်တရာယျမြားလာတယျ။
ဒါပမေဲ့ ပွဿနာတဈခုက ဒီ(၃)ယောကျစလုံးဟာ Finishing Skill အားနညျးတာပါပဲ။ မနျယူအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးအပွောငျးအလဲမှာ အရေးပါတာက ကှငျးလယျလူ ဟာရဲရား Ander Herrera ပါ။ သူ့ရဲ့ Energy နဲ့ Aggressiveness တှကေ မနျယူ ကှငျးလယျမှာ တကယျလိုအပျနတောဖွဈပွီး ဟာရဲရားကွောငျ့ ကှငျးလယျလိုလို၊ ခံစဈလိုလို ဖွဈနတေဲ့ မာတဈ Matic အတှကျလညျး ဝနျပေ့ါသှားတယျ။ ဟာရဲရားက ညာခွမျးကနေ Box To Box ကစား၊ မာတဈက Deep Lying ပုံစံနဲ့ ခံစဈကို Cover လုပျနိုငျလို့လညျး မနျယူကှငျးလယျနဲ့ ခံစဈကွားမှာ Gap ဖွဈနတောတှေ လြော့ကသြှားတယျလို့ ဆိုရမယျ။ အဲဒီမှာ ပေ့ါဘာကလညျး သူအားသာတဲ့ ကှငျးလယျဘယျခွမျးကနေ တိုကျစဈကို ပိုပွီး လိုကျကစားလို့ ရသှားတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခုနောကျပိုငျး မနျယူအသငျးရဲ့ အသကျက ပွငျသဈသားတှဖွေဈတဲ့ မာစီယဲလျနဲ့ ပေါ့ဘာတို့ရဲ့ ဘယျခွမျးဖွဈနတောပါ။
မျောရငျဟိုအနနေဲ့ မနျစီးတီးနဲ့ပှဲမှာ (၄-၃-၃)ပုံစံအစား ကှငျးလယျအသာရဖို့ (၄-၁-၄-၁)နဲ့ ပှဲထှကျလာဖို့ မြားတယျ။ အပွောငျးအလဲဖွဈလာနိုငျတာက မာစီယဲလျကို တိုကျစဈဘယျခွမျးအစား ကှငျးလယျ ဘယျတောငျပံမှာ ပွောငျးလဲအသုံးပွုသှားဖို့ရှိနပွေီး မနျစီးတီးညာနောကျခံလူ ဝေါလျကာ Kyle Walker ကို Control လုပျနိုငျဖို့ အဓိကဖွဈလာနိုငျတယျ။ ဒီပုံစံဆိုရငျ မနျယူရဲ့ ခံစဈက Solid ဖွဈသှားနိုငျပမေယျ့ Counter ပွနျစရငျတော့ အခကျအခဲရှိလာမယျ့ သဘောပါပဲ။
မနျယူမှာ အားအနညျးဆုံးက စမောလငျး Smalling – လငျဒီလော့ဖျ Victor Lindelöf တို့အတှဲ ဖွဈလာနိုငျပွီး အခုနောကျပိုငျး စမောလငျး အမှားမြားလာတာက နညျးနညျး စိုးရိမျစရာဖွဈနတေယျ။ Tactic Master ကွီ မျောရငျဟို ဘယျလိုနညျးဗြူဟာတှေ အသုံးပွုမှာလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ ဒါကတော့ မနျယူအသငျးရဲ့ နညျးဗြူဟာပိုငျးကို ခဉျြးကပျကွညျ့တာဖွဈပွီး မနျစီးတီးရဲ့ နညျးဗြူဟာတှကေို အပိုငျး(၂)အဖွဈ ဆကျလကျ သုံးသပျသှားမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျော အားပေးကွပါဦး . . .